Iindidi zeebhedi zesibhedlele | JBH yezoNyango
Isibhedlele esibhedlele ngokubanzi sibhekisa kwibhedi yabongikazi, eyilelwe ngokweemfuno zonyango kunye nemikhwa yokuphila ebhedini, kwaye yenzelwe namalungu osapho ukuba ahambe nayo. Inemisebenzi emininzi yokonga kunye namaqhosha okusebenza. Isebenzisa ibhedi ekhuselweyo nekhuselekileyo, efana nokubeka esweni ubunzima, ukutya ngasemva, kunye nokujika okuthe tye, ukuthintela izilonda zokulala, uxinzelelo olubi, ukubeka iliso ekumanzeni i-alamu, ukuthuthwa okuhambayo, ukuphumla, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo (intshukumo nje, ukuma), amayeza ukumnika kunye neminye imisebenzi. Umbhede wokubuyisela kwimeko yesiqhelo unokusetyenziswa wedwa okanye ngokudibene nonyango okanye izixhobo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Iibhedi zokonga ezithe zangeniswa ngokubanzi azikho ngaphezulu kwe-90cm ububanzi kwaye ziyibhedi enye yomaleko olunye. Kukulungele ukuqaphela unyango, ukuhlolwa kunye nokusebenza kwamalungu osapho. Ingasetyenziselwa abantu abasempilweni, abakhubazeke kakhulu, abakhulileyo, ukungasebenzi komchamo, izigulana ezenzakeleyo ebuchotsheni kunyango oluzinzileyo okanye lokunyanga ekhaya, ngakumbi ukuze kube nokusebenziseka. Izixhobo eziqhelekileyo zebhedi yamandla zibandakanya intloko yebhedi, isakhelo sebhedi esenza imisebenzi emininzi, unyawo lwebhedi, umlenze, umatrasi wombhede, isilawuli, intonga yoxinzelelo yombane, oonogada aba-2 abasekhohlo nabasekunene, kunye ne-4 yokufaka i-casters cwaka. Itafile yokutyela edityanisiweyo, itreyi yempompo yomoya eyi-1 ye-anti-decubitus, kwishelufa yangaphantsi kwebhedi, ii-alamu zokujonga ukumanzisa ukhuko olungqongqo ezi-2, iseti yokubeka iliso yesisindo, itafile yokuhambisa ngokuthe tyaba kunye nezinye izinto. Kukho iibhedi eziqhelekileyo, iibhedi zokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kunye neebhedi eziguqukayo ezikrelekrele. Iibhedi zesibhedlele zikwanokubizwa ngokuba ziibhedi zesibhedlele, iibhedi zonyango, iibhedi zokonga zabahlali, njl. Zisetyenziswa ikakhulu kwizibhedlele ezinkulu, amaziko ezempilo aselokishini, amaziko enkonzo yezempilo yoluntu, amaziko okuvuselela, kunye nokhathalelo lwasekhaya. Iwadi njl.
Ngokwemathiriyeli, inokwahlulwa kwiibhedi ze-ABS, zonke iibhedi zentsimbi ezingenasinxibe, iibhedi zentsimbi ezingenasici, zonke iibhedi zentsimbi zokutshiza, njl.
Ngokwenjongo, inokwahlulahlulwa kwiibhedi zonyango kunye neebhedi zasekhaya.
Ngokwalo msebenzi, unokwahlulwa ube ziibhedi zombane zesibhedlele kunye neebhedi zesibhedlele. Iibhedi zombane zasesibhedlele zingahlulahlulwa zibe ziibhedi zombane ezisebenza ngesibhedlele ezintlanu kunye nezibhedlele ezisebenza ngombane ezintathu. Iibhedi zesibhedlele esenziwa ngesandla zingahlulwa zibe ziibhedi zesibhedlele esili-double-rocker, iibhedi zesibhedlele esinye, kunye neebhedi zesibhedlele esibhedlele.
Umsebenzi wesibhedlele wombane osetyenziswayo
Ibhedi yenziwa ngezinto ezenziwe ngeAluminiyam zewelding, umphezulu webhedi uyinto eyingqini yomnatha, kwaye umphezulu webhedi unokuphefumla. Umphezulu wonke webhedi uphathwa ngokutshiza nge-electrostatic.
I-guardrail yenziwe ngeefayili ze-aluminium ye-aerospace kwaye iyakusongwa.
Amavili amane amkela i-125mm yezonyango ubunewunewu ethe cwaka kunye nokuzivalela ngokwakho, ezizinzileyo nezithembekileyo.
Itafile yokutyela yitafile yeplastikhi ebanzi ye-30cm ububanzi enokuqina, yomelele kwaye iqinile.
I-angle yokusonga ngasemva: 0-75 °, i-angle yokusonga yomlenze: 0-90 °
Ubungakanani: 2000 × 900 × 500mm (ubude × ububanzi × ubude bembhedi)
Ubungakanani bemilo yangasese: 225 × 190mm
Imisebenzi emininzi yesibhedlele esibhedlele
Ukuthatha iibhedi ze-ABS njengomzekelo, iibhedi ezinemisebenzi emininzi zahlulwe zangama-rocker kabini, iibhedi ezililitye elinye kunye neebhedi ezicabaleleyo.
Umsebenzi wemveliso yesibhedlele esisibhedlele esifana ncam naleyo yesibhedlele sombane esibhedlele, kodwa isigulana asinakuyisebenzisa buqu kwaye sifuna uncedo lomntu ohamba naye. Kuba ixabiso lisezantsi kunelesibhedlele sombane esibhedlele, ilunge ngakumbi kwizigulana ezilele ebhedini ixesha elincinci. Kwangelo xesha, kunciphisa umthwalo kunye noxinzelelo lwabasebenzi abahamba kunye nalo.
Ibhedi yesinyithi eneebhedi ezingenasici ezingenasici
Intloko yebhedi yentsimbi engenasici, isakhelo sebhedi esifafazwe ngentsimbi kunye nebhedi yomphezulu zifanelekile kulwakhiwo kwaye zihlala ixesha elide. Iyayiqonda le misebenzi mibini yokubuyela umva kunye nokugoba umlenze. Kufanelekile kwizigulana esele zikhulile ezingakwaziyo ukuphakama ebhedini okanye ukuphazamiseka ekuphumeni ebhedini. Ibabonelela ngeenkonzo zokhathalelo olukhethekileyo eziyimfuneko ukuze bachache, unyango, ukuhamba kunye nobomi bemihla ngemihla, kuphucula inqanaba lokhathalelo, kwaye kuphucula umgangatho wobomi bezigulana, ngakumbi usapho olufanelekileyo, amaziko onyango oluntu, amakhaya abalupheleyo, izibhedlele zezempilo
ibhedi yokulala kwizigulana, iibhedi zononophelo, ezilahlwayo kwezonyango, ibhedi yamandla esibhedlele, imaski yomlomo wobuso, ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo,
ibhedi yokulala kwizigulana, iibhedi zononophelo, ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo, imaski yomlomo wobuso, ibhedi yamandla esibhedlele, ezilahlwayo kwezonyango,